भिडियोमा हेर्नुहोस् फोहोर टिप्ने ह्याण्डसम ! कमाउछन् यतिधेरै पैसा, खाते भन्दा मन दुख्छ – Dainik Sangalo
भिडियोमा हेर्नुहोस् फोहोर टिप्ने ह्याण्डसम ! कमाउछन् यतिधेरै पैसा, खाते भन्दा मन दुख्छ
July 30, 2020 782
काठमाण्डौंको कलंकीमा केहि यूवाहरु घरघरबाट संकलित फोहोर मिलाउँदैछन् । उनीहरुले दिनभरी लगाएर कलंकी वरपरका घरबाट फोहोर ल्याए । फोहोरको बर्गीकरण गरेर तत्काल बेच्ने मिल्ने छुट्टै अनि फाल्ने फोहोर छुट्टै बनाएका छन् ।
बेच्न मिल्ने फोहोर तत्कालै बेचर उनीहरुले पैसा पार्नेछन् भने अरु फोहोर सम्बन्धित ठाउँमा लगेर व्यवस्थापना गर्नुपर्ने उनिहरुको भनाइ छ । यो समुहमा प्रदेश नम्वर २ को वीरगञ्जदेखि नुवाकोट लगाएतका जिल्लाका यूवाहरु छन् ।
उनिहरुले काठमाण्डौंमै सकृय रहेको एउटा सामाजिक सस्थामा आवद्ध भएर फोहोर संकलन र त्यसको व्यवस्थापनको काममा जुटेका हुन् । यसरी फोहोर टिप्दै हिड्दा समाजले आफुहरुलाई नराम्रो सोच्ने गरेकोमा उनिहरुको दुखेसो छ ।
उनीहरुलाई फोहोरवाला, खाते भन्दा निकै मन दुख्ने रहेछ । ‘खाते नै भनेपनि हामीले आफ्नो काम छौ र सफा छ’ फोहोर मिलाउँदै गरेका एक यूवाले भने । अब भने उनिहरुलाइ समाजले प्रहार गर्ने तिखो बाणले बिझाउन छोडिसकेको छ ।
Prevनिश्चल र स्वस्तिमाको ‘दिमाग खराब’ नबन्ने
Nextसीपीएल खेल्नका लागि सन्दीप वेष्टइण्डिजका लागि उडे, पुगेलगत्तै १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने